HIV/ AIDS (ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ)
ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ အေအိုင်ဒီအက်စ် -AIDS ဆိုသည်မှာ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ခုခံအားကိုနှောင့်ယှက်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည် အထိဖြစ်စေသော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ကူးစက်ပုံ- လိင်မှကူးစက်တတ်သောရောဂါဖြစ်သည်။- ထို့အပြင် ရောဂါပိုးရှိသော သူနှင့် ဓား၊ဆေးထိုးအပ် မျှဝေသုံးခြင်း- ရောဂါပိုးရှိသောသွေးကို...
Whooping Cough (ကြက်ညှာချောင်းဆိုးရောဂါ )
on: 05 Jul, 2017
ကြက်ညှာချောင်းဆိုးရောဂါသည် အလွန်ကူးစက်လွယ်သည့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွင် ဖြစ်သောရောဂါဖြစ်ပြီး အသက်ရှူတိုင်း “Whoop” (ဟွပ်ပ်) ဟု မြည်တတ်လေ့ ရှိသည်။လက္ခဏာများရောဂါပိုးစတင်ကူးစက်ခံရပြီးနောက် ၁ ပတ်မှ ၁၀ ရက်အထိ ကြာတတ်သော်လည်း တစ်ချို့လူများတွင်မူ ထိုထက်ပို၍ ကြာတတ်သည်။ အစပထမပိုင်းတွင် သိပ်မပြင်းထန်ဘဲ ရိုးရိုးအအေးမိလက္ခဏာများဖြစ်သော. နှာစေးခြင်း. န...
Dengue (သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ )
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါသည် ခြင်ကိုက်ခံရခြင်းမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပိုး သယ်ဆောင်ထားသော ခြင်ကိုက်ခံရပြီး ၄ ရက်မှ ၁၀ ရက်အတွင်းတွင် ရောဂါလက္ခဏာများ ပေါ်လာပါသည်။လက္ခဏာများ- အဖျားကြီးခြင်း (၄ဝဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် သို့ ၁၀၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်)- ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခေါင်းကိုက်ခြင်း (severe headache)- မ...
Tetanus ကို မေးခိုင်ရောဂါဟု သုံးသည်။ ဤသို့သုံးခြင်းမှာ Tetanus ရောဂါတွင် ထင်ရှားသော လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည့် Tetanus ကို တင်စား၍ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ မေးခိုင်ရောဂါမှာ ဗက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါဖြစ်သည်။ ဗက်တီးရီးယားအမည်မှာ Clostridium tetani ဖြစ်၏။ဗက်တီးရီးယားမှ Exotoxin အဆိပ်ပစ္စည်းထုတ်သည်။ ယင်းအဆိပ်ပစ္စည်းသည် ကြွက်သားများသို့ သွားသော အာရုံကြောများနှင့် ကလာပ်စည်းများ (motor nerve end...
Acute sinusitis (ရုတ်တရတ်နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိပ်ကပ်နာ)
on: 14 Jun, 2017
အကျဉ်းရှင်းလင်းချက်ထိပ်ကပ်နာ ဖြစ်ရခြင်းသည် လူ့ဦးခေါင်းခွံတွင်နှာခေါင်းပေါက်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော ဦးခေါင်းခွံတွင်းလေလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။နှာခေါင်းတွင်းရှိအခန်းလေးများရောင်ရမ်းကာ နှပ်ရည်များထွက်၍ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်သည်။နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့် အသက်ရှူရခက်သည့်အပြင် မျက်လုံးနှင့်မျက်နှာများဖောင်းအစ်လာပြီး ခေါင်းကိုက်နိုင်ပါသည်။များသောအားဖြင့် တုပ်ကွေးဖြစ်ခြင်း...
ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး အောင်မအောင်ပြန်စစ်ဖို့ လိုသလား
ဒီတစ်ပတ် ဗုဒ္ဓဟူး ကူးစက်ခေါင်းစဉ်အတွက် ဆရာရွေးထားတာကတော့ အမေးများတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်တဲ့“ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး အောင်မအောင်ပြန်စစ်ဖို့ လိုသလား” ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင် အောင်မအောင်လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ခံအား(Antibody) ပေါ်မပေါ် ပြန်စစ်ဖို့ လိုမလိုဆိုတာ မကြာခဏ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်...
on: 31 May, 2017
ပါးချိတ်ရောင်ခြင်းသည် ဗိိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသောကြောင့် နားအောက်ဘက်တွင်ရှိသည့် တံတွေးဂလင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်းဖြစ်သည်။မော်နာပေါက်သည်ဟုလည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ပြီး ၂-၃ပတ်အတွင်း လက္ခဏာများပြလာနိုင်ပါတယ်။- နားအောက်ဖက်ရှိတံတွေးဂလင်းများနာကျင်ရောင်ရမ်းလာခြင်း (ပါးနှစ်ဖက်ရောင်လာခြင်း)- အဖျားတက်ခြင်း- ခေါင်းကိုက်ခြင်း- ကြွက်သားများနာကျင်ကိုက...
ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါJapanese B Encephalitis
အကျဉ်းရှင်းလင်းချက်ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါသည်ရောဂါပိုးကိုသယ်ဆောင်ထားသော Culex ဟုခေါ်သောခြင်ကိုက်ခံရ ရာမှ တစ်ဆင့်ကူးဆက်နိူင်သည်အဆိုပါရောဂါပိုးသည် အိမ်မွေး ဝက်များ တွင်လည်းဖြစ်ပွားနိုင်သဖြင့် အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နီးကပ်စွာနေပါကကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည် ၁၈၇၁ ခုနှစ်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အရှေ့အာရှတို့တွင် အဖြစ်များသည်မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်...
ခွေးရူးပြန်ရောဂါသည် ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာပါကအချိန်တိုအတွင်းသေဆုံးနိုင်သော ကူးစက်ရောဂါဖြစ်သည်။ကူးစက်နှုန်း၏ ၉၉%ခန် ့သည် အိမ်မွေးခွေးများမှတစ်ဆင့် လူသို ့ကူးစက်ခြင်းဖြစ်သည်။ကိုယ်ခန္ဓာအရေပြားပေါက်ပြဲနေသည့်နေရာကို ကူးစက်ခံထားရသည့်တိရိစ္ဆာန်၏တံတွေးဝင်သွားပါက ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည်။ခွေးများအပြင် လင်းနို ့၊မြေခွေး၊တောကြောင်၊ခွေးအ၊မြွေပါ စသည့်တောရိုင်းတိရိစ္တာန်များမှလည်း တစ်ဆင့်ကူး...